Itoobiya ayaa ugu dambeyn yeelanaysa madaxweyne cusub – XOGMAAL.COM
Itoobiya ayaa ugu dambeyn yeelanaysa madaxweyne cusub
Itoobiya oo berri yeelanaysa madaxweyne cusub. Mulatu Teshome oo is casilaya
By Soomaaliya	 On Oct 24, 2018
Madaxweynaha Itoobiya, Mulatu Teshome, ayaa la filayaa inuu berri baarlamaanka waddankiisa u gudbiyo isticqaaladiisa is casilaadda.
Sida uu ku soo warramayo wariyaha BBC ee Itoobiya, C/naasir Xikam, madax-xafiiseedka xiriirka baarlamaanka federaalka Itoobiya ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in madaxweynaha uu go’aankaas gaaray.
Isla berri ayaa lagu wadaa in baarlamaanka Itoobiya uu doorto madaxweynihii shanaad ee uu waddanku yeesho tan iyo wixii ka dambeeyey markii la eryey Mengistu Haile Mariam, horraantii 1991.
Lama sheegin sababta uu isu casilayo Mulatu Teshome, wuxuuna xafiiska hayey muddo qiyaastii afar sano ah, ayadoo uu sannadna u dhiman yahay.
Waxaa aad loo aaminsan yahay in is casilaadiisa ay la xiriirto arrin salka ku haysa isu dheellitirka siyaasadda Itoobiya ee wax qaybsiga qabaailka, ayadoo ra’iisul wasaare Abiy Axmed iyo Mulatu Teshome ay labadaba ka soo jeedaan qowmiyadda Orommada, sidaa darteedna aysan isku darsan karin labadaas jago ee waaweyn.
Waxaa la filayaa in qofka noqon doona madaxweynaha soo socda ee Itoobiya uu ka yimaado, ugu yaraan, xisbiga talada haya ee EPRDF sidi caadada ahayd, laguna qanciyo mid ka mid ah beelaha tirsanaya in la gacan bidxeeyey.
Teshome wuxuu xilka kala wareegay Girma Wolde Gorgis oo hayey xafiiska muddo 12 sano ah, gaar ahaan intii u dhaxaysay Siteembar 2001 – Oktoobar 2013.
Waxaa isna ka sii horreeyey Negasso Gidada oo madaxtinimada hayey intii u dhaxaysay Agoosto 1995 – Oktoobar 2001.
Gidada intii uusan xilkaas qaban waxaa hayey Meles Zenawi oo si KMG ah u hayey intii u dhaxaysay Maajo 1991 – Agoosto 1995, wuxuuna markii dambe noqday ra’iisul wasaarihii 13aad ee Itoobiya ilaa iyo intii uu ka geeriyoonayey 20 Agoosto 2010, xilligaas oo uu 57 jir ahaa.
Sida uu dhigayo dastuurka Itoobiya, xilka madaxweynaha ayaa ah mid aan awood fulin lahayn, waxaana awoodda fulinta inteeda badan leh ra’iisul wasaaraha, waxaana inta badan qaban jiray xilkaas siyaasiyiin ka soo jeeda qowmiyadda Orommada.
#Ethiopia to appoint new President tomorrow https://t.co/pJeWKJDAmc pic.twitter.com/mWNvbRq4x0
— FANA BROADCASTING C (@fanatelevision) October 24, 2018
Akhriso:- Tuugadii ugu doqonsanaa oo aad looga hadal hayo Warbaahinta
Gaadiidka Badda ee wadata Calanka Soomaaliya oo lala xisaabtamayo